Beesha Caalamka war kasoo saartay diidmada Soomaaliya ee wakiilkii Midowga Afrika - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Beesha Caalamka war kasoo saartay diidmada Soomaaliya ee wakiilkii Midowga Afrika
Beesha Caalamka war kasoo saartay diidmada Soomaaliya ee wakiilkii Midowga Afrika
Midowga Afrika (AU), Midowga Yurub (EU), Golaha Iskaashiga (IGAD), iyo Qaramada Midoobay (UN) ayaa warsaxaafadeed wadajir ah oo ay soo saareen ku tilmamay in mid laga xumaado tilaabadii Soomaaliya ku diiday wakiilka Sare ee dhexdhexaadinta Arrimaha doorashooyinka.
Waxaa ay sidoo kale tageero u muujiyeen Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble.
Qodobada kasoo baxay warkooda waxaa ka mid ah:
Inuu taageero buuxda u muujiyo qabashada Ra’iisul Wasaaraha ee shir madaxeedka si dib loogu bilaabo wada hadalka; Waxaan ugu baaqayaa madaxda Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo dhammaan Dowladaha xubnaha ka ah Federaalka inay si daacad ah oo shuruud la’aan ah uga qayb galaan shir madaxeedka; kuna dhiirrigeli kaqeybgalayaasha inay ka shaqeeyaan heshiis la isla oggol yahay oo ku saabsan hirgelinta heshiiskii Sebtember 17, oo ay ku jiraan talooyinkii 16kii Febraayo ee Guddiga Farsamada ee Baydhabo, oo aasaas adag u ah qabsoomidda doorashooyinka dib u dhac la’aan iyo waqti cayiman;
2) In shir madaxeedku u taagan yahay fursad muhiim ah oo horay loogu dhaqaajinayo dalka si loo qabto doorasho ku saleysan Heshiiskii Sebtember 17; dhiirrigelinta ka-qaybgalka daneeyeyaasha muhiimka ah wadahadallada lala yeelanayo saxiixayaasha Heshiiska; hoosta ka xarriiq in aysan jirin isku dayyo lagu carqaladeynayo geeddi-socodka ama carqaladeynta heshiiska; iyo in la muujiyo baahida loo qabo abuuritaanka hannaan dabagal oo ku habboon si loo joogteeyo hirgelinta natiijooyinka shir madaxeedka.
3) Dib-u-xaqiijinta go’aannadii hore ee ahaa in aan la taageerin geeddi-socod kasta oo is-barbar socda, doorashooyin qayb ah, ama dadaallada cusub ee horseedaya kordhin kasta ee muddooyinkii hore;
4) Waxaan si qoto dheer uga xumahay go’aankii ka soo baxay hoggaanka Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ee lagu diiday Wakiilka Sare ee Midowga Afrika ee Soomaaliya; waxayna hoosta ka xariiqeysaa doorka muhiimka ah ee Midowga Afrika ee horumarinta nabada iyo amniga Soomaaliya, oo ay ku jirto waxtarka weyn ee AMISOM;
5) Waxaan si xoog leh ugu dhiirrigelinayaa hoggaamiyeyaasha Soomaaliyeed inay dejiyaan qorshe dhab ah oo lagu hirgelinayo qoondada haweenka ee ugu yar 30%, iyadoo la xoojinayo muhiimadda ay leedahay ilaalinta xuquuqda haweenka iyo xoojinta ka qaybgalkooda siyaasadeed.
Previous articleHowlgallo ka socda Jowhar